Inona no atao hoe BEDMAS amin'ny matematika?
Inona no atao hoe BEDMAS?
Ampiasao ny BEDMAS mba hahatsiaro ny fandidiana
Na dia mahery fo amin'ny fahatakarana ny 'antony' ao ambadiky ny foto-pisainana matematika aza aho, dia misy ny famintinana izay manampy ny olona hahatsiaro ny fomba hanatanterahana ny dingana rehetra amin'ny matematika. BEDMAS na PEDMAS dia iray amin'ireo. Ny BEDMAS dia fanafohezan-teny manampy amin'ny fitadidiana ny filaharan'ny asa amin'ny alàlan'ny fototra . Raha manana olana matematika izay mitaky ny fampiasana karazana asa maro ( fampitomboana , fizarana, exponents , fonosana, fanintelony, fanampiana) dia ilaina ary ny matematika dia nanaiky ny baiko BEDMAS / PEDMAS.
Ny taratasy tsirairay ao amin'ny BEDMAS dia manondro ny ampahany amin'ny fandidiana ampiasaina. Ao amin'ny matematika dia misy ny fepetra fitsinjarana ny fepetra noraisinao. Mety ho diso hevitra ianao raha manao fanatanjahantena tsy miala amin'ny baiko. Rehefa manaraka ny baiko marina ianao dia ho marina ny valiny. Tadidio ny miasa avy any ankavia miankavanana rehefa mampiasa ny baikon'ny BEDMAS momba ny asa. Ny taratasy tsirairay dia:
B - Kofehy
A - Fanampiny
Azonao atao koa ny nandre ny fanafohezan-teny PEDMAS. Amin'ny fampiasana ny PEDMAS, ny filaharan'ny asa dia mitovy ihany koa, ny P kosa dia midika fotsiny hoe loharano. Ao anatin'ireo andinin-teny ireo, ny fonon-teny sy ny fononteny dia midika zavatra iray ihany.
Misy zavatra roa tokony hotsaroana rehefa mampihatra ny baikon'ny PEDMAS / BEDMAS. Ny foibe / Parenthesis dia tonga hatrany aloha ary ny mpizara dia tonga faharoa. Rehefa miasa miaraka amin'ny fampitomboana sy ny fizarazarana ianao dia manao izay ho avy voalohany rehefa miasa avy any ankavia miankavanana.
Raha tonga ny fampitomboana voalohany dia ataovy alohan'ny fizarana. Mitovy amin'izany koa ny fampidirana sy ny fanasitranana, rehefa tonga ny fanintelony aloha, dia atsofoka alohan'ny manampy anao. Mety hanampy amin'ny fijerena ny BEDMAS toy izao izany:
B - Fananana na Parenthesis
Diviziona na Multiplication
Fanampiana na fanodinkodinana
Rehefa miasa miaraka amin'ny valizy ianao ary misy mihoatra ny karazana fehezam-pejy, dia hiasa miaraka amin'ny fonosana anaty fonosana ianao ary hiasa amin'ny lamosinao ivelany.
Ireo tricks mba hahatsiaro ny PEDMAS
Mba hahatsiarovana an'i PEDMAS na BEDMAS dia nampiasaina ireto sazy manaraka ireto:
Nolavin'ny Big Elephants ny totozy sy ny sifotra.
Ireo Elefanta Pink dia manimba ny siny sy ny sifotra
Azonao atao ny mamorona ny sazinao manokana mba hanampiana anao hahatsiaro ilay fanafohezan-teny ary azo antoka fa misy soso-kevitra maromaro kokoa hanampy anao hahatsiaro ny lamin'ny asa. Raha mamorona ianao, mamoròna iray izay ho tsaroanao.
Raha mampiasa kalkan-dahatsoratra fototra ianao mba hanatanterahana ireo kisary, tadidio ny miditra ao amin'ny kaonty araka izay takian'ny BEDMAS na PEDMAS. Arakaraka ny itiavanao ny fampiasana ny BEDMAS, dia mora kokoa aminy izany.
Raha vantany vao mahazo aina ianao amin'ny fahatakarana ny lamin'ny asa atao, dia manandrama manamboatra takelaka hanatsarana ny lamin'ny asa. Spreadsheets dia manolotra karazana formulas sy fahafaha-manamarina araky ny toetr'andro rehefa tsy azo ampiasaina ny kalko.
Farany, zava-dehibe ny hahatakatra ny matematika ao ambadiky ny ' acronym '. Na dia manampy azy aza ny fanafohezan-teny, dia fantaro ny fomba, nahoana ary rehefa miasa izy no zava-dehibe kokoa.
Fantatra ihany koa: Ordinateran'ny asa amin'ny Algebra .
Fanitsakitsahana hafa: BEDMAS na PEDMAS (Klanera vs Parenthesis)
Fahavetavetana mahazatra: Ny kofehy manoloana ny fonony dia mampisy ny fahasamihafana amin'ny fanafohezana anarana BEDMAS vs PEDMAS
Ohatra amin'ny fampiasana ny BEDMAS amin'ny fandidiana ny asa
20 - [3 x (2 + 4)] Ataovy aloha ny fonosana (valiha).
= 20 - [3 x 6] Ataovy ny fonosana sisa.
= 20 - 18 Ataovy ny fanintonana.
(6 - 3) 2 - 2 x 4 Ataovy ny fonosana (valizy)
= (3) 2 - 2 x 4 Ambarao ny mpanatrika.
= 9 - 2 x 4 Mihabetsaha ankehitriny
= 9 - 8 Dieny izao = 1
= 2 2 - 3 × (10 - 6) Manarara ao anatin'ny fononteny (valizy).
= 2 2 - 3 × 4 Ambarao ny mpizara.
= 4 - 3 x 4 Ataovy ny fampitomboana.
= 4 - 12 Ataovy ny fanintonana.
Ahoana ny fomba fampiasana ny RAND sy ny RANDBETWEEN Functions amin'ny Excel
Inona no atao hoe robustness amin'ny statistika?
Qualitative Data Definition sy Ohatra
Lesona fototra amin'ny fitantarana ny fotoana
Famaritana ny Bimodal amin'ny statistika
Ahoana ny fampiasana ny Function BINOM.DIST amin'ny Excel
Ahoana ny fampiasana ny STDEV.S Function amin'ny Excel
Fantaro ny fahasamihafana misy eo amin'ny mari-pamantarana sy ny statistika
10 Trangam-pahaizana mahagaga maro hampianatra ny ankizy mba hitomboany
Manaova fikarohana miaraka amin'ny NORM.DIST sy NORM.S.DIST amin'ny Excel
Ny maha-zava-dehibe ny sehatry ny Math Concept
Ny zava-mahadomelina sy ny fahafatesan'i Elvis Presley tamin'ny 42
Delphi ohatra fandalinana volavola amin'ny fampiasana AsyncCalls
Inona no atao hoe kiraro? Famaritana ny fanarabiana
Basketball Cheers, Chants ary Yells
AP English Exam: 101 Terms
Vavaka ho an'ny Rahalahy
Ilaina ve ny filoha handalo fitsapana ara-pahasalamana?
Ohatra voafaritra ao amin'ny tontolon'ny fitambarana matoanteny
Inona avy ny horonantsary mihatra amin'ny 'Sex and the City 2' Soundtrack?
Sary avy amin'i Constantin the Great, Emperora avy any Roma
Alohan'ny hividiananao akorety
Ireo Top 10 Romantic Oldies Albums
Daïsche Duke Jeep avy amin'ny lohan'ny Hazzard: "Dixie"
Ahoana ny hiresahana ny anaran'i Xi Jinping
Seoul, Korea Atsimo
Tabs Topy amin'ny fianarana Blues
Mpamboly Lehibe famokarana sy sanda
Teny ampiasaina ao amin'ny gara
Valence Bond Theory Famaritana
Tokony hanao fanadinadinana fanampiny ve ianao?
Mpanjaka telo - hendry avy any atsinanana